प्युठानबाट आयो प्रदेश ५ को स्थायी राजधानीबारे यस्तो सुझाव, राजधानी कहाँ बन्ला ? – जलजला अनलाइन
प्युठानबाट आयो प्रदेश ५ को स्थायी राजधानीबारे यस्तो सुझाव, राजधानी कहाँ बन्ला ?
Posted on February 24, 2019 Author Jaljala Online	Comments Off on प्युठानबाट आयो प्रदेश ५ को स्थायी राजधानीबारे यस्तो सुझाव, राजधानी कहाँ बन्ला ?
फागुन १२, प्यूठान । प्यूठानका सरोकारवालाले प्रदेश ५ को राजधानी प्यूठान बनाउन माग गरेका छन् ।
बुटवल वा दाङ हुन नहुने सुझाब दिदै उनीहरुले प्रदेशको राजधानी प्यूठान बनाउन सुझाव दिएका हुन् ।
प्रदेश नामकरण र स्थायी राजधानीसम्बन्धी सुझाव सङ्कलन एवं अन्तरक्रियामा आईतबार सरोकारवालाले प्रदेश राजधानी बुटवल वा दाङ हुन नसक्ने बताएका छन् । यस प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये प्यूठान सबैभन्दा पायक पर्ने ठाउँ भएकाले प्यूठानलाई पनि समेटी राजधानी बनाउन माग गरिएको हो ।
स्थायी राजधानी बुटवल, तुलसीपुर र घोराही राजधानी बन्ने चर्चा चलिरहेका बेला प्यूठानवासीले यी तीन वटै ठाउँलाई अस्वीकार गरेका हुन् । प्रस्तावित ठाउँ विकसित भइसकेकाले नयाँ ठाउँलाई प्रदेश राजधानी बनाएर उक्त ठाउँको विकास गर्न प्रदेश सरकारले नयाँ रणनीति बनाउन जरुरी रहेको सरोकारवालाको माग थियो ।
भारत र चीनको नजीक भएका क्षेत्रमा राजधानी बनाउन नहुने यहाँका बासिन्दाको तर्क छ । प्रदेशसभा विशेष समितिले आयोजना गरेको सुझाव सङ्कलन कार्यक्रमका सहभागीले नयाँ ठाउँमा राजधानी बनाउन सुझाव दिएका हुन् ।
सहभागीले प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउँदा प्यूठानको सरुमारानी गाउँपालिकासँगै दाङको राप्ती र गडवा गाउँपालिका, कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका र अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिकाका क्षेत्रलाई समेटी राजधानी बनाउनसमेत सुझाव दिएका हुन् ।
बाँकेका बासिन्दाले लिखित र मौखिक रुपमा बुटवललाई स्थायी राजधानी नमान्‍ने सुझाव दिएका छन्।
बाँकेवासीले नेपालगञ्ज नै प्रदेश राजधानी हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। नेपालगञ्ज हुन नसके दाङको भालुवाङ आसपासमा राजधानी बनाउन सकिने राय अघि सारेका छन्। नेपालगञ्जबाट कसैले पनि बुटवलको पक्षमा समर्थन गरेनन्।
आठ महिनामा आठ हवाई दुर्घटना: किन असुरक्षित नेपाली आकाश ?
Posted on September 9, 2018 September 9, 2018 Author Jaljala Online
भदौ २४, काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो ८ महिनाभित्र भएका हवाई दुर्घटनामा ५९ जनाले ज्यान गुमाए । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ, सबैभन्दा ठूलो क्षति बंगालादेशी कम्पनी युएस–बंगला एयरलाइन्स दुर्घटनामा भयो । त्रिभुवन विमानस्थलभित्रै भएको दुर्घटनामा ५१ जनाले ज्यान गुमाए । किन असुरक्षित नेपाली आकाश ? सन् २०१८ हवाई सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट असुरक्षित बनेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन […]
श्रीमानकाे मृत्युपछि मालिकले गरे बलात्कार, प्रहरीलेले देखायो अचम्मको व्यवहार
Posted on September 29, 2018 September 29, 2018 Author Jaljala Online
असोज १३, काठमाडौँ । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा संलग्नको पहिचान गरी कारबाही गर्न नसक्दा सरकार आलोचित भएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल ९० प्रतिशत घटनामा प्रहरी सफल भएको तर, कञ्चनपुर घटनाको राजनीतिकरण गरिएको दाबी गर्दै हिँडेका छन् । तर, बलात्कारका घटनामा न्यायको पखाईमा रहेकाहरु थुप्रै छन् । उनीहरु मध्ये सप्तरीको सुरुङ […]
बंगलादेशमा विमान अपहरणः आत्मसमर्पण गर्न नमानेपछि अपहरणकारी यसरी मारिए